Waxaad badiyay xogta on your iPad, sababtoo ah waxaa galay hab-kabashada iyo aadan ku soo celin? Ama waxaad ka kac tirtiray qaar ka mid ah muhiimsan photos, videos, ama xiriirada aad iPad (macruufka 9)? Ka dhig funaanado aad on. Mar kasta oo aad dareentid in aad ka mid ah xog muhiim ah laga badiyay on your iPad, waxaa jirta fursad ah in aad dib iyaga si aad u hesho haddii aad isku daydo software ka soo kabashada iPad - Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) .
Mar kasta oo aad ka heli aad lumay ama la tirtiro xogta qaar ka mid ah aad iPad (macruufka 9 taageeray), fadlan joojiya adiga oo isticmaaleya isticmaale iPad isla markiiba. Isla marka aad tirto faylasha on your iPad, faylasha, kuwaas oo aan baaba'aan isla markiiba, laakiin joogo on your iPad, sugayeen in la overwritten by xog cusub. Haddii aad sii adiga oo isticmaaleya isticmaale iPad, ka dibna waxa ay u badan tahay in aad ka dhigi doonaa, kuwaas oo files tirtiray tageen weligiis. Oo ah, computer ka heli dhaw iyo raacaan mid ka mid ah hababka hoos ku qoran inuu ka soo kabsado xogta lumay ka iPad.
iPad Data Recovery - Ladnaansho Khasaaray / Photos masaxay, Videos, Xiriirada, qoraalo ka iPad
Taageer iPads badan: iPad oo dhan sida iPad Air, iPad mini, iPad Cusub, iPad 2, iPad 1 iyo aad u badan;
Hababka 3 kabashada: Ladnaansho xogta ka iPad si toos ah, Lugood iyo iCloud gurmad files;
Save kabsaday fariimaha, qoraalo, iyo xiriirada si toos ah u iPad;
3 Solutions dib u soo ceshano tirtiray / Khasaaray Xogta laga iPad la iPad Data Recovery Tool
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka aad bixisaa 3 hababka soo kabashada dib u soo ceshano photos tirtiray ama laga badiyay, videso, xiriirada, oo dheeraad ah oo ku iPad. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) on your computer iyo raacaan mid ka mid ah xalka soo socda si ay u bartaan sida loo isticmaalo this iPad software kabashada xogta (la heli karo macruufka 9).
1: kabsado Lugood
2: ka soo kabsado iCloud
3: kabsado iPad
Xalka 1: Ladnaansho tirtiray iPad Data via kaabta Lugood
Haddii aad xoojiyaa aad iPad in Lugood hor laga badiyay ama la tirtiro faylasha, markaas sidan waa habka ugu fiican ee aad ka bogsato xogta lumay ka iPad (macruufka 9 heli karo).
Tallaabada 1 Dooro gurmad iPad ay u iskaan
Ka dooro "Recovery ka Lugood gurmad file" mode on sare ee suuqa kala, iyo dhammaan hayaan iDevice halkaan soo bandhigi doonaa. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u doortaan gurmad aad iPad iyo riix soco in "Start Scan".
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta iPad
Halkan dhammaan faylasha in Lugood gurmad file lagu soocaa category iyo soo bandhigay, oo aad ku eegaan karo iyo fiiri mid mid. Ka dib markii xiisaha badan, ka hubi kuwa aad dib u doonayaan oo guji "Ladnaansho". Hadda, marka aad isku daydo in ay soo kabsadaan fariimaha la tirtiro ama laga badiyay qoraalka, qoraalada, iyo xiriirada ka iPad, waxaa jiri doona laba doorasho: Ladnaansho in Device ceshan in Computer. Haddii aad rabto in aad hesho xogta ka dib si aad u iPad, markaas dooran 'Ladnaansho in Device ". Wixii noocyada kale file, waxaad soo karaa oo kaliya si aad u computer.
Xalka 2: ceshano tirtiray iPad Data via kaabta iCloud
Riix soo kabsado iCloud kaabta File on sare ee suuqa kala barnaamijka. Markaas gasho in aad xisaabta iCloud. Ka dib markii in, dooran file gurmad aad rabto in aad u soo dejisan ah. Si loo badbaadiyo waqtiga aad, ee pop-up cusub, hubi nooc aad u baahan yahay file inaad kala soo baxdo. Waad og tahay, gurmad iCloud ku file waa mid aad u ballaaran. By xulashada nooca file inaad kala soo baxdo, waxa ay hoos u dhigi doontaa waqtiga qarash ku saabsan habka dajinta.
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan karo oo dhan files bixiyay in gurmad iCloud faylka. Dooro faylasha aad u baahan tahay oo iyaga ku eegaan. Marka aad ka heli, kuwaas oo files aad u baahan tahay, guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer. Sida qoraalka, xiriirada iyo fariimaha, waxaad iyaga soo kaban karto, si aad u computer ama soo si aad iPad dib. Waa in aad.
Xalka 3: Si toos ah Ladnaansho tirtiray Xogta laga iPad
Tallaabada 1 raadso la tirtiro xogta on iPad
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan iPad (macruufka 9 taageeray) si aad u computer. Markaas ordi Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo riix Start Scan button muuqday in uu furmo si ay baarista iPad. Ha barkinta aad iPhone inta ay socoto iskaanka ah.
Fiiro Gaar ah: Wixii iPad 1 isticmaala, waxaad sidoo kale u wareegi kartaa si an Mode Advanced dhex button ee geeska hoose ee midig. Waxa fiican u soo kabsanaya ka kooban warbaahinta. Hadda, si toos ah u soo kabsaday sawiro ka iPad mini, iPad, 2, iPad Air, iyo ugu dambeeyay ee lagu daydo iPad aan la taageeray weli. Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa xal 1 iyo 2 xal dib u soo ceshano sawiro aad iPad.
Marka scan la dhammeeyo, waxaad riixi kartaa qaybta file tegey inay ku eegaan dhammaan faylasha helay mid mid. Markaas eegista soo kabsado waxyaabaha aad u baahan tahay oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya, si aad u computer ama iPad. Qoraalada Hadda oo kaliya, fariimaha qoraalka ah, iyo xiriirada ku badbaadi karaa in aad mar kale iPad.
Hot Articles ee macruufka 8 Casriyaynta aad jeceshahay inaad
5 Talooyin ah in la Qaado hor macruufka 9/8 Hagaaji
Update macruufka 9/8 on iPhone / iPad / iPod taabashada
IPhone kaabta ka hor macruufka 9/8 Hagaaji
Best 15 Apps u iDevice carar macruufka 9/8
Dardar Your iPhone in Orod macruufka 9/8 si dhakhso ah
Bedelka Old iPhone si iPhone 6
> Resource > iPad > iPad Recovery: Ladnaansho Photos Lost, Videos, Xiriirada & Notes ka iPad